ညအိပ်နေချိန် ထူးထူးဆန်းဆန်း အလိုအလျောက် ထုံးသွားပြီး ညှပ်ခွင့်,ဖြီးခွင့်မရှိသည့် ထူးဆန်းသော ဆံထုံးပိုင်ရှင်. . . » MPA
ညအိပ်နေချိန် ထူးထူးဆန်းဆန်း အလိုအလျောက် ထုံးသွားပြီး ညှပ်ခွင့်,ဖြီးခွင့်မရှိသည့် ထူးဆန်းသော ဆံထုံးပိုင်ရှင်. . .
နက်မှောင်ပြီး ရစ်ပတ်ထုံးနေသောဆံနွယ်ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် သူမနေထိုင်သည့် အခန်းကျဉ်း၏ မီးဖိုချောင်အား သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေသည်။
ထူးခြားသည်မှာ သူမ၏ဆံထုံးဖြစ်သည်။ ၁ပေခန့်ရှည်သည့် သူမ၏ဆံထုံးကို ကချင်ထဘက်ဖြင့် ထုံးထားလျှက် မီးဖိုချောင်အား သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေသည်။ ၎င်း၏ဆံထုံးသည် သူမကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက်ထုံးထားခြင်းမဟုတ်ပဲ၊ ညအိပ်နေသည့်အချိန် ထူးထူးဆန်းဆန်း အလိုအလျောက် ထုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။
“ဆံပင်အခုလိုမထုံးသွားချိန် ကျွန်မအရမ်းဖျားနေတာ တစ်ညတော့ ညအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန် သူ့ဟာသူ ထုံးသွားတာ။ အဲကနေ အဖျားလည်းပျောက်သွားတယ်”ဟု ဆံထုံးပိုင်ရှင် အသက်(၃၉)နှစ် ဒေါ်လဆန်ဆိုင်းခေါန်က ဆိုသည်။
ယခင်ဖြောင့်တန်းနေသည့် ၎င်း၏ဆံနွယ်သည် ထူးဆန်းစွာ အလိုအလျောက်ထုံးသွားခြင်းဖြစ်ပြီး ဆံပင်အား ဘီးဖြီးလို့လည်းမရသလို ညှပ်လို့လည်းမရကြောင်း သူမကဆိုသည်။
၎င်းသည် ကလေး(၄)ယောက်၏မိခင်ဖြစ်ပြီး မိသားစုနှင့်အတူ လိုင်ဇာမြို့မှ ဝိုင်ကြိုင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ခိုလှုံလျှက်ရှိသည်။ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဘဝ မဖြစ်မီအချိန်တွင် ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ကဇူးကျေးရွာတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ သူမ၏ဆံပင်သည် အဆိုပါဒုက္ခသည်စခန်းတွင် နေထိုင်နေစဉ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ယခုလိုဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်သည်။
သူမ၏အမျိုးသားဖြစ်သူ ဦးလော့်ခွမ့်ဇော်နော်က ၎င်းတို့၏မျိုးရိုးတွင် အမျိုးသမီးများ ယခုလို သဘာဝအတိုင်း ပြန်ဖြေ၍မရသော ဆံထုံးထုံးသွားသည့် အဖြစ်အပျက်မှာ ယခု၎င်း၏ဇနီး ဒေါ်လဆန်ဆိုင်းခေါန်နှင့်ဆိုလျှင် မျိုးဆက်(၇)ဆကရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။ ဦးလော့်ခွမ့်ဇော်နော်သည် ကချင်တိုင်းရင်းဆေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။
“အမျိုးသမီးတွေမှာ ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင် အမျိုးသားတွေ ဦးဆောင်လုပ်တဲ့ ဦးဆောင်မှုထဲမှာပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့သားတွေလည်း ဘာအန္တရာယ်မှ မဖြစ်ဘူး။ အန္တရာယ်ကင်းတယ်။”ဟု ဦးလော့်ခွမ်းဇော်နော်က ဆိုသည်။
ဆံပင်ယခုလိုဖြစ်လာပြီဆိုလျှင် လုံးဝညှပ်လို့မရကြောင်းလည်း ၎င်းကဆိုသည်။ ညှပ်လိုက်လျှင် အိမ်သားတွေဆီမှာ အန္တရာယ်တစ်ခုခု ကြုံလာတတ်ကြောင်း ဆိုသည်။
“အဖွားလည်း ဒီလိုဖြစ်တယ်။ သူကအရမ်းရှုပ်တယ်ဆိုပြီး ညှပ်လိုက်တာ အဖေတို့ညီအစ်ကိုတွေ (၆)ယောက်ထဲက (၄)ယောက် တစ်ခါတည်းသေသွားတယ်။ အဲကနေ နောက်ပိုင်း မညှပ်တော့ဘူး။”ဟု ဦးလော့်ခွမ့်ဇော်နော်က ဆိုသည်။
ဦးလော့်ခွမ့်ဇော်နော်၏ မိခင်ဖြစ်သူလည်း ယခုလိုဆံပင်ထုံးခဲ့ပြီး သေသည်အထိ ဆံပင်မညှပ် ဆံပင်မဖြီးပဲ နေသွားခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
“အမေလည်းဖြစ်တယ်။ သူကသေသည်အထိ ဆံပင်မညှပ်ဘူး။ မဖြီးဘူး။ ဒီတိုင်းပဲ နေသွားတယ်။ သူဆုံးခါနီး သုံးရက်လောက်အလိုမှာတော့ တစ်ယောက်ယောက်က ဖြေပေးလိုက်သလို ဆံထုံးက အလိုအလျောက် ဖြေကျသွားတယ်။”ဟု ဦးလော့်ခွမ့်ဇော်နော်က ဆိုသည်။
ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်လဆန်ဆိုင်းခေါန်သည် သူမ၏အမျိုးသားပြောပြသည့်အတွက် ၎င်း၏ထူးဆန်းသည့် ဆံထုံးနှင့်ပတ်သက်၍ အထူးတလည်အံ့သြခြင်း မရှိခဲ့သလို၊ ယခုလိုဖြစ်သည့်အတွက် ထွေထွေထူးထူး အခက်အခဲလည်း မရှိကြောင်း ဆိုသည်။
“အခုတော့ အကျင့်ဖြစ်သွားတော့ ဘာအခက်အခဲမှ မရှိဘူး။ ရေချိုးရင်တော့ နေပူတဲ့နေ့ပဲ ချိုးလို့ရတယ်။”ဟု ဒေါ်လဆန်ဆိုင်းခေါန်က ဆိုသည်။
ဆိုင်ကယ်စီးရင်တော့ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ဆောင်းလို့ မရသည့်အတွက် လိုင်ဇာမှ ယာဉ်ထိန်းရဲများမှ အရေးယူခြင်း ခံရဖူးကြောင်း ဆိုသည်။
အပြင်သွားလျှင် သူမကိုမတွေ့ဖူးသည့်သူများက သူမ၏ထူးဆန်းနေသည့် ဆံနွယ်ထုံးကို ကြည့်ပြီး မေးမြန်း၊ ကြည့်ရှုခြင်းများရှိကြောင်း ဆိုသည်။
ထူးဆန်းသည့် ဆံထုံးပိုင်ရှင် ဒေါ်လဆန်ဆိုင်းခေါန်သည် ၂၀၁၅ခုနှစ် သူမယခုလို ဆံပင်ထုံးသွားကတည်းက မိသားစုဝင်များ ယခင်ကထက် ပိုမိုအဆင်ပြေလာသည်ဟု ၎င်းယုံကြည်နေကြောင်း ဆိုသည်။
သားသမီးများ ယခင်က မကြာခဏ ဖျားနာမှုများရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနောက်ပိုင်း သားသမီးများလည်း ဖျားနားခြင်းမရှိသလောက် ကျန်းမာနေခြင်းသည် ထူးဆန်းစွာဖြစ်သွားသည့် ဆံထုံးကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သူမက ယုံကြည်နေသည်။
“သားအလတ်ကောင်ဆိုရင် တစ်နှစ်မှာ ဆေးရုံ ၇ခါတောင် တက်ရတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ သိပ်မဖျားတော့ဘူး။”ဟု ဒေါ်လဆန်ဆိုင်းခေါန်က ဆိုသည်။
ကျန်းမာရေးများ ကောင်းလာသည်သာမက အိမ်တွင်မွှေးမြူထားသည့် အိမ်မွှေးတိရစ္ဆာန်များလည်း ယခင်ထက် ပိုမိုပွားများလာပြီး အဆင်ပြေလာကြောင်း သူမက ဆိုသည်။
ဒေါ်လဆန်ဆိုင်းခေါန်သည် သူမ၏ဆံထုံးအား တစ်သက်လုံး မညှပ်မဖြီးပဲထားရန် ဆုံးဖြတ်ထားပြီး သူမ၏ထူးဆန်းသည့် ဆံထုံးသည် ဘုရားကပေးသည့် လက်ဆောင်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည့်လက်ခံ ထားသည်။crd
Source : Kachin Wave
နကျမှောငျပွီး ရဈပတျထုံးနသေောဆံနှယျပိုငျရှငျ အမြိုးသမီးတဈဦးသညျ သူမနထေိုငျသညျ့ အခနျးကဉျြး၏ မီးဖိုခြောငျအား သနျ့ရှငျးရေးလုပျနသေညျ။
ထူးခွားသညျမှာ သူမ၏ဆံထုံးဖွဈသညျ။ ၁ပခေနျ့ရှညျသညျ့ သူမ၏ဆံထုံးကို ကခငျြထဘကျဖွငျ့ ထုံးထားလြှကျ မီးဖိုခြောငျအား သနျ့ရှငျးရေးလုပျနသေညျ။ ၎င်းငျး၏ဆံထုံးသညျ သူမကိုယျတိုငျ စိတျကွိုကျထုံးထားခွငျးမဟုတျပဲ၊ ညအိပျနသေညျ့အခြိနျ ထူးထူးဆနျးဆနျး အလိုအလြောကျ ထုံးသှားခွငျးဖွဈသညျ။
“ဆံပငျအခုလိုမထုံးသှားခြိနျ ကြှနျမအရမျးဖြားနတော တဈညတော့ ညအိပျပြျောနတေဲ့အခြိနျ သူ့ဟာသူ ထုံးသှားတာ။ အဲကနေ အဖြားလညျးပြောကျသှားတယျ”ဟု ဆံထုံးပိုငျရှငျ အသကျ(၃၉)နှဈ ဒျေါလဆနျဆိုငျးခေါနျက ဆိုသညျ။
ယခငျဖွောငျ့တနျးနသေညျ့ ၎င်းငျး၏ဆံနှယျသညျ ထူးဆနျးစှာ အလိုအလြောကျထုံးသှားခွငျးဖွဈပွီး ဆံပငျအား ဘီးဖွီးလို့လညျးမရသလို ညှပျလို့လညျးမရကွောငျး သူမကဆိုသညျ။
၎င်းငျးသညျ ကလေး(၄)ယောကျ၏မိခငျဖွဈပွီး မိသားစုနှငျ့အတူ လိုငျဇာမွို့မှ ဝိုငျကွိုငျစဈဘေးဒုက်ခသညျစခနျးတှငျ ခိုလှုံလြှကျရှိသညျ။ စဈဘေးဒုက်ခသညျဘဝ မဖွဈမီအခြိနျတှငျ ဝိုငျးမျောမွို့နယျ ကဇူးကြေးရှာတှငျ နထေိုငျခဲ့ကွသညျ။
သူမ၏ဆံပငျသညျ အဆိုပါဒုက်ခသညျစခနျးတှငျ နထေိုငျနစေဉျ ၂၀၁၅ ခုနှဈမှ ယခုလိုဖွဈလာရခွငျးဖွဈသညျ။
သူမ၏အမြိုးသားဖွဈသူ ဦးလေျာ့ခှမျ့ဇျောနျောက ၎င်းငျးတို့၏မြိုးရိုးတှငျ အမြိုးသမီးမြား ယခုလို သဘာဝအတိုငျး ပွနျဖွေ၍မရသော ဆံထုံးထုံးသှားသညျ့ အဖွဈအပကျြမှာ
ယခု၎င်းငျး၏ဇနီး ဒျေါလဆနျဆိုငျးခေါနျနှငျ့ဆိုလြှငျ မြိုးဆကျ(၇)ဆကရှိပွီ ဖွဈကွောငျးဆိုသညျ။ ဦးလေျာ့ခှမျ့ဇျောနျောသညျ ကခငျြတိုငျးရငျးဆေးဆရာတဈဦး ဖွဈသညျ။
“အမြိုးသမီးတှမှော ဒီလိုဖွဈလာပွီဆိုရငျ အမြိုးသားတှေ ဦးဆောငျလုပျတဲ့ ဦးဆောငျမှုထဲမှာပါဝငျတဲ့ အဖှဲ့သားတှလေညျး ဘာအန်တရာယျမှ မဖွဈဘူး။ အန်တရာယျကငျးတယျ။”ဟု ဦးလေျာ့ခှမျးဇျောနျောက ဆိုသညျ။
ဆံပငျယခုလိုဖွဈလာပွီဆိုလြှငျ လုံးဝညှပျလို့မရကွောငျးလညျး ၎င်းငျးကဆိုသညျ။ ညှပျလိုကျလြှငျ အိမျသားတှဆေီမှာ အန်တရာယျတဈခုခု ကွုံလာတတျကွောငျး ဆိုသညျ။
“အဖှားလညျး ဒီလိုဖွဈတယျ။ သူကအရမျးရှုပျတယျဆိုပွီး ညှပျလိုကျတာ အဖတေို့ညီအဈကိုတှေ (၆)ယောကျထဲက (၄)ယောကျ တဈခါတညျးသသှေားတယျ။ အဲကနေ နောကျပိုငျး မညှပျတော့ဘူး။”ဟု ဦးလေျာ့ခှမျ့ဇျောနျောက ဆိုသညျ။
ဦးလေျာ့ခှမျ့ဇျောနျော၏ မိခငျဖွဈသူလညျး ယခုလိုဆံပငျထုံးခဲ့ပွီး သသေညျအထိ ဆံပငျမညှပျ ဆံပငျမဖွီးပဲ နသှေားခဲ့ကွောငျး ဆိုသညျ။
“အမလေညျးဖွဈတယျ။ သူကသသေညျအထိ ဆံပငျမညှပျဘူး။ မဖွီးဘူး။ ဒီတိုငျးပဲ နသှေားတယျ။ သူဆုံးခါနီး သုံးရကျလောကျအလိုမှာတော့ တဈယောကျယောကျက ဖွပေေးလိုကျသလို ဆံထုံးက အလိုအလြောကျ ဖွကေသြှားတယျ။”ဟု ဦးလေျာ့ခှမျ့ဇျောနျောက ဆိုသညျ။
ဇနီးဖွဈသူ ဒျေါလဆနျဆိုငျးခေါနျသညျ သူမ၏အမြိုးသားပွောပွသညျ့အတှကျ ၎င်းငျး၏ထူးဆနျးသညျ့ ဆံထုံးနှငျ့ပတျသကျ၍ အထူးတလညျအံ့သွခွငျး မရှိခဲ့သလို၊ ယခုလိုဖွဈသညျ့အတှကျ ထှထှေထေူးထူး အခကျအခဲလညျး မရှိကွောငျး ဆိုသညျ။
“အခုတော့ အကငျြ့ဖွဈသှားတော့ ဘာအခကျအခဲမှ မရှိဘူး။ ရခြေိုးရငျတော့ နပေူတဲ့နပေဲ့ ခြိုးလို့ရတယျ။”ဟု ဒျေါလဆနျဆိုငျးခေါနျက ဆိုသညျ။
ဆိုငျကယျစီးရငျတော့ ဆိုငျကယျဦးထုပျဆောငျးလို့ မရသညျ့အတှကျ လိုငျဇာမှ ယာဉျထိနျးရဲမြားမှ အရေးယူခွငျး ခံရဖူးကွောငျး ဆိုသညျ။
အပွငျသှားလြှငျ သူမကိုမတှဖေူ့းသညျ့သူမြားက သူမ၏ထူးဆနျးနသေညျ့ ဆံနှယျထုံးကို ကွညျ့ပွီး မေးမွနျး၊ ကွညျ့ရှုခွငျးမြားရှိကွောငျး ဆိုသညျ။
ထူးဆနျးသညျ့ ဆံထုံးပိုငျရှငျ ဒျေါလဆနျဆိုငျးခေါနျသညျ ၂၀၁၅ခုနှဈ သူမယခုလို ဆံပငျထုံးသှားကတညျးက မိသားစုဝငျမြား ယခငျကထကျ ပိုမိုအဆငျပွလောသညျဟု ၎င်းငျးယုံကွညျနကွေောငျး ဆိုသညျ။
သားသမီးမြား ယခငျက မကွာခဏ ဖြားနာမှုမြားရှိခဲ့သျောလညျး ယခုနောကျပိုငျး သားသမီးမြားလညျး ဖြားနားခွငျးမရှိသလောကျ ကနျြးမာနခွေငျးသညျ ထူးဆနျးစှာဖွဈသှားသညျ့ ဆံထုံးကွောငျ့ ဖွဈသညျဟု သူမက ယုံကွညျနသေညျ။
“သားအလတျကောငျဆိုရငျ တဈနှဈမှာ ဆေးရုံ ၇ခါတောငျ တကျရတယျ။ အခုနောကျပိုငျးတော့ သိပျမဖြားတော့ဘူး။”ဟု ဒျေါလဆနျဆိုငျးခေါနျက ဆိုသညျ။
ကနျြးမာရေးမြား ကောငျးလာသညျသာမက အိမျတှငျမှေးမွူထားသညျ့ အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျမြားလညျး ယခငျထကျ ပိုမိုပှားမြားလာပွီး အဆငျပွလောကွောငျး သူမက ဆိုသညျ။
ဒျေါလဆနျဆိုငျးခေါနျသညျ သူမ၏ဆံထုံးအား တဈသကျလုံး မညှပျမဖွီးပဲထားရနျ ဆုံးဖွတျထားပွီး သူမ၏ထူးဆနျးသညျ့ ဆံထုံးသညျ ဘုရားကပေးသညျ့ လကျဆောငျဖွဈသညျဟု ယုံကွညျ့လကျခံ ထားသညျ။crd
Health, Knowledge, Literature, News, Uncategorized, Wonders